Mid kamid ah Guddiga uu Magacaabey Sheekh Shaakir oo is casilay. – Al-Hurriyah
Article Updated:	October 22, 2019
Cabdi Shakuur Ciise Xaashi kana mid ahaa Xubnaha Gudiga sidoo kalena ah Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Galmudug ayaa sheegay in uu is casilay sababtuna ay tahay in aan lagala tashan ka mid qoqoshada Gudigaasi raalina uusan ka aheyn.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya ayaa horay u Magacaawday Guddi ka kooban 13 Xubnood, hayeeshee ay diideen hoggaanka Ahlusunna iyo musharixiinta Madaxweynaha Galmudug.
PRESS STATEMENT [Mogadishu 21 October 2019: The National Coordination Commission for the Safety of Somali…
Wasaaradda Caafimaadka XFS oo Muqdisho ka furtay shir looga hadlayo dhammeystirka Qorshaha Qaran ee sugnaanta caafimaadka+Sawirro
Wasaaradda Caafimaadka XFS oo Muqdisho ka furtay shir looga hadlayo dhammeystirka Qorshaha Qaran ee…
Hir-Shabeelle Oo La Tacaaleysa Dadka Uu Soo Ritay Cudurka Shuban Biyoodka Ee ku Dhaqan Degaanada Maamulkaasi
Maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxa ay faah faahin Guud ka bixiyeen Cudurka Shuban Biyoodka oo ka dilaacey Magaalaada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan,kuwaas oo la dhigey Isbitaalka Magaaladaas. Guddoomiye ku xigeenka dhinaca Arrimaha Bulshada Goolka…
Ciidamo iskugu jira Boolis.Nabadsugid,&Milateri ayaa lagu wareejiyay amniga guude ee deegaannada Balicade iyo Furinta-foore oo ka tirsan gobalka Galgaduud halkaasi oo ay ku dagaalameen maleeshiyo beeleed halkaasi wada dega . Ciidankan lagu wareejiyay…
Madaxweyne QoorQoor Oo Qalinka Ku Duugay Miisaaniyada Maamulkiisa
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi kaariye “Qoorqoor” ayaa xalay saxiixay miisaaniyadda dowladgoboleedka Galmudug ee sanadka 2020-ka kaddib markii ay meelmariyeen golaha wasiirrada iyo mudanayaasha Baarlamanka labaad ee Galmudug. Miisaaniyada…
Maxkamada Ciidamada Oo Xukun Kuriday Nin lagu Helay In Uu Ka Tirsan Yahay Alshabaab
Maxakamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa xukun Daai'in ku riday Xubin ka mid ah Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cumar Cabdi Daawle, kaasi oo loo heysto in uu ka mid ahaa Al-shabaab, qeybtooda fulisa weerarrada tooska ah ee lagu qaado fariisimaha…